Etu ị ga -esi hụ foto profaịlụ nke Instagram gị ka ukwuu | Nzukọ mkpanaka
Otu esi ahụ foto profaịlụ nke Instagram kachasị
Ụlọ Ignatius | | Instagram, Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet
Instagram aghọọla netwọkụ mmekọrịta kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụrụ na anyị ewere ya dị ka nke a, ọkachasị kara aka ịkekọrịta ụdị foto niile, n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike ịchọta vidiyo site na akụkọ Instagram. Ndị ọrụ mebere ikpo okwu a bụ ụzọ nkwukọrịta ha ha na -elebakarị anya na foto profaịlụ ha.
Ọ bụrụ na ịchọrọ lee foto profaịlụ nke Instagram buru ibuN'isiokwu a, anyị ga -egosi gị ụzọ niile enwere ike isi nweta ya, ma ọ bụ jiri ibe weebụ ma ọ bụ ngwa anyị nwere ike iwunye na ngwaọrụ mkpanaka anyị n'efu.
1 Otu esi etinye foto profaịlụ na Instagram
2 Otu esi agbanwe foto profaịlụ nke Instagram gị
3 Otu esi ahụ foto profaịlụ nke Instagram kachasị
3.4 Nnukwu profaịlụ Foto
3.5 InsFull - foto profaịlụ buru ibu
Otu esi etinye foto profaịlụ na Instagram
Ọ bụrụ na Instagram abụrụla netwọkụ mmekọrịta anyị, anyị ga -emerịrị ya tinye nlebara anya pụrụ iche na onyonyo anyị na -eji na profaịlụ. Ozugbo anyị họrọla onyonyo anyị chọrọ iji dị ka foto profaịlụ, anyị na -emepe ngwa Instagram na ekwentị mkpanaaka anyị wee mee usoro egosipụtara n'okpuru:
Ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, pịa na akara ngosi na -anọchite anya akaụntụ anyị, nke nọchiri anya akara ngosi dị na ala ngwa ahụ.
N'elu, dị n'okpuru aha njirimara anyị n'elu ikpo okwu, efu oyiyi na -anọchite anya akaụntụ anyị.
Mgbe ah pịa akara + dị na ala. N'oge ahụ, igwefoto nke ngwaọrụ anyị ga -emepe iji weghara ọhụrụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji onyonyo echekwara na ngwaọrụ anyị, pịa akara ngosi dị na aka ekpe ala ihuenyo ahụ nke na -enye anyị ohere ịnweta ọba foto anyị na anyị na -ahọrọ foto anyị chọrọ.
Otu esi agbanwe foto profaịlụ nke Instagram gị
Usoro iji gbanwee foto profaịlụ nke Instagram bụ otu ihe ahụ mgbe anyị chọrọ itinye ihe onyonyo na akaụntụ ahụ.
Anyị mepee ngwa wee pịa akara ngosi na -anọchite anya akaụntụ anyị, nke akara nke isi nọchiri anya ya na nke dị na akuku aka nri ala nke ngwa a.
N'elu, dị n'okpuru aha njirimara anyị n'elu ikpo okwu, egosiri onyonyo anyị nwere n'oge ahụ.
Iji gbanwee ya, pịa akara + dị na ala. Mgbe ahụ igwefoto nke ngwaọrụ anyị ga -emeghe ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iji onyonyo echekwara na ngwaọrụ anyị, pịa akara ngosi dị na aka ekpe ala ihuenyo ahụ na -enye anyị ohere ị nweta onyonyo echekwara na ngwaọrụ anyị.
Ọzọ, anyị ga -agagharị na album na họrọ nke anyị chọrọ iji dị ka foto profaịlụ ọhụrụ.
N'adịghị ka netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ dị ka Twitter, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ onyonyo profaịlụ n'ogo buru ibu, anyị ga -enwerịrị ya pịa onyonyo a nke mere na a ga -egosipụta ya n'uju.
Otú ọ dị, Ọrụ a adịghị na Instagram (Ebumnuche ndị na-enweghị isi maka ịnye ọrụ a ụlọ ọrụ ahụbeghị)
Lee, anyị gosiri gị ngwa kachasị mma na ibe weebụ iji mepee nha foto profaịlụ nke onye ọrụ ọ bụla na Instagram.
Nke mbụ, anyị ga -eburu n'uche na ma ngwa na ibe weebụ anyị na -egosi gị n'isiokwu a ga -egosi anyị foto profaịlụ kacha ukwuu ma ọ bụrụhaala na profaịlụ bụ nke ọha. Ọ bụrụ na profaịlụ bụ nkeonwe, anyị nwere ike chefuo azịza ndị a niile.
Enweghị ụzọ ị ga -esi nwee ike ịnweta ma gbasaa foto profaịlụ nke onye ọrụ nke akaụntụ ya bụ nkeonwe.
Otu n'ime nhọrọ mbụ anyị nwere n'aka anyị lee foto profaịlụ ka ukwuu Ihe ndekọ Instagram bụ Save-Insta. Site na ikpo okwu a, anyị nwekwara ike lelee ma budata foto Instagram, vidiyo, reels na akụkọ.
Ka ịhụ foto profaịlụ nke Instagram buru ibu yana, ọ bụrụ na anyị chọrọ, budata ya na Save-Insta, anyị ga-emerịrị usoro ndị a, ma site na mkpanaka mkpanaka ma ọ bụ ihe nchọgharị desktọọpụ.
Nke mbụ, anyị aghaghị nweta weebụsaịtị site na njikọ a.
Mgbe ah tinye aha akaụntụ kedu foto profaịlụ nke anyị chọrọ ịhụ nke ka ibu.
Ozugbo anyị dere aha ahụ, pịa na View bọtịnụ.
N'ikpeazụ, a ga -egosipụta foto profaịlụ,tinyere ọnụ ọgụgụ nke posts, ndị na -eso ụzọ, na mmadụ akaụntụ ahụ na -eso. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ibudata ihe onyonyo a, pịa bọtịnụ download.
IGDownloader bụ ikpo okwu ọzọ na -enyekwa anyị ohere ịchekwa ver ma budata foto profaịlụ ka ịhụ ka o buru ibu. Iji hụ foto profaịlụ nke Instagram ka ibu na IGDownloader, anyị ga -eso usoro ndị m na -egosi gị n'okpuru:
Nweta IGDownloader site na ndi a njikọ.
Mgbe ah anyị na -abanye aha onye ọrụ n'ime igbe nchọta wee pịa tinye.
Sekọnd ole na ole ka e mesịrị, a ga -egosipụta foto profaịlụ nke akaụntụ Instagram nke anyị webatara. Dị n'okpuru, a na -egosipụta bọtịnụ maka Budata site na ntaneetị na ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ibudata wee hụ profaịlụ profaịlụ nke akaụntụ Instagram ka ibu, ihe ngwọta ọzọ dị na ịntanetị bụ Instadp. Ikpokoro a na -enyekwa anyị ohere ibudata foto, akụkọ, vidiyo na reels ezigara na Instagram ọ bụrụhaala na akaụntụ onye ọrụ bụ nke ọha.
Nweta Instadp site na ndi a njikọ.
Mgbe ahụ, a ga -egosipụta faịlụ nke profaịlụ anyị. Ka ịhụ onyonyo ka ukwuu, pịa na Full Size bọtịnụ.
Sekọnd ole na ole ka e mesịrị, a ga -egosipụta ihe onyonyo a ihuenyo zuru oke jiri bọtịnụ na -akpọ anyị ka anyị budata onyonyo na ngwaọrụ anyị.
Nnukwu profaịlụ Foto
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwa kama ibe weebụ iji lee ma budata foto profaịlụ ka ukwuu, ị nwere ike iji ngwa Foto Profaịlụ Nnukwu, ngwa anyị nwere ike budata ya kpamkpam n'efu site na Storelọ Ahịa Play.
Ozugbo anyị mepere ngwa ahụ, anyị na -ede aha onye ọrụ nke foto profaịlụ nke anyị chọrọ ịhụ n'onye buru ibu wee pịa na iko ịkwa iko dị n'aka nri.
A ga -egosipụta foto profaịlụ na ihuenyo niile. Ka ibudata ya, pịa na akụ ala na anyị na -ahụ n'okpuru foto a.
Developer: Foto Nnukwu profaịlụ & Foto Profil Büyük
InsFull - foto profaịlụ buru ibu
N'adịghị ka ngwa niile na ibe weebụ m gosipụtara gị n'isiokwu a, yana InsFull ọ dị mkpa ịnweta akaụntụ Instagram anyị site na ngwa n'onwe ya ka ị nwee ike nweta onyonyo profaịlụ anyị na -achọ.
N'ihi ọrụ ya, ọ nwere ike ịba uru naanị ma ọ bụrụ na anyị nwere akaụntụ Instagram, ma ọ bụrụ na anyị tụkwasịrị obi itinye data nke akaụntụ Instagram anyị na ngwa ahụ. Ọ bụrụ na anyị enweghị akaụntụ Instagram, ngwa a abaghị anyị uru ọ bụla.
insfull - nnukwu foto profaịlụ maka Instagram
Developer: Rfan ŞENER
Atụla anya na ị ga -enwe ike ibudata onyonyo profaịlụ nke ndị ọrụ ndị ọzọ na mkpebi mbụ ya, tere aka na ya. Ntọala niile m kwuru n'isiokwu a na -enye anyị mkpebi kacha nke pikselụ 150 × 150.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Instagram » Otu esi ahụ foto profaịlụ nke Instagram kachasị
Koodu Rocket League niile na -arụ ọrụ na emelitere
Otu esi emelite Fortnite na ụdị kachasị ọhụrụ